यसरी शरिर बाहिरै धड्किन्छ उनको मुटु! – Taja Khawar
यसरी शरिर बाहिरै धड्किन्छ उनको मुटु!
प्रकाशित मिति: सोमबार, साउन ११, २०७८ समय: १७:५६:०३
एजेन्सी । अमेरिकामा बस्ने एउटी बालिका एकदम दुर्लभ समस्याबाट गुज्रिरहेकी छन् । विरसविया गोन्चरोभा नामकी यस बालिकाको पेन्टालोगी अफ कन्ट्रोल भनिने उनी आमाको गर्भमै छँदा उनका मांसपेशीहरु गलत तरिकाले विकसित भए ।
बुहारिले रातदिन कु टे पछि एक्लै बस्दै आमा ,यसरी दुखेसो गर्छिन् ,कठै बिचरा …
यस अवस्थाका कारण गोन्चरोभाले कुनै पी’डा महसुस भने भएको छैन । यसको कारणले गर्दा उसको मुटु शरिर बाहिर नै देखिन्छ ।
उनको मुटुमा प्वाल पनि छ । गोन्चारोभा यस्तो अवस्थाका कारण प्रायः अस्पतालमा समय बिताउनु पर्छ । २०२० को सुरुमा उनको अक्सिजनको स्तर एकदम छिटो तल झर्न थाल्यो, त्यसपछि उनलाई आपतकालीन कोठामा लगियो र अर्को दुई हप्तामा अस्पतालमा समय बिताएपछि गोन्चारोभाको अक्सिजनको स्तर सामान्यमा फर्कियो।
दारी २०१५ मा रूस बाट अमेरिका आउने निर्णय गरेका छन् ।
उनलाई आशा छ कि उनी अमेरिकामा छोरीको शल्य-क्रिया गर्न सक्षम हुनेछन् । ताकी छोरीको मुटुमा भएको प्वालको पनि उपचार गर्न सकियोस् । यद्यपि गोन्चरोभाको उ च्च र क्त चा पका कारण उसको फोक्सोका धमनीहरू प्रभावित छन्, त्यसैले यो शल्यक्रिया पनि सम्भव भएको छैन ।
गोन्चरोभा भन्छन कि कहिलेकाँही अक्सिजनको मात्रा यत्ति कम हुन्छ कि उनीहरूलाई च क्क र आउन लाग्छ । तर यसको बावजुद उनी सक्रिय हुन मन पराउँछिन् र उनी आफ्ना साथीहरूसँग नाच्न र गाउन मन पराउँछिन् । यद्यपि को रो ना अवधिका कारण उनी यस वर्ष आफ्ना साथीहरूसँग बढी समय दिन सकेकी छैनिन ।
Last Updated on: July 26th, 2021 at 5:56 pm